Zvinokumbira uye ruzivo | Chikoro che Oakleigh uye The Early Years Intervention Center
Mushure meChikoro Chikoro
Zvinokumbira uye ruzivo
Zvokudya zveChikoro Zvisingabhadhari uye Pupil Premium
Pay Pay Online
Kufanana Mikana Dzemitemo
Tumira SUNGA YENYAYA
Mutambo Wemitambo Premium Action Plan
Free ICT Resources kubva kuLGfL
Vacancies ku Oakleigh School
Zvinokumbira uye Zvenje
Mifananidzo nemavhidhiyo pazviitiko zvakakosha kuchikoro
Tinonyanya kukukoshesa iwe uchiuya kuzotsigira uye kugoverana mabasa akadai akadai semagungano, kuratidzira pamwe chete nemwana wako, asi zvinokumbira kukumbira kuti iwe utore chete mapikicha / vhidhiyo yemwana wako, sezvimwe vana vasina ruzivo rwekusiya chikoro chekushandisa their photos.
Ndapotawo nyatsoteerera paunenge uisa mafirimu / video pahuwandu hwemagariro evanhu, uye iwe unogona kungoita izvi kune wako pachako.
Zvipfeko uye Mipiro Yokuzvidira
Ndapota funga kuti zvipfeko zvemwana wako zvose zvakanyatsonyorwa. Tinoedza zvakaoma kuti tisasanganise zvipfeko, asi zvinobatsira chaizvo kana vakadanwa. Zvingava zvinobatsira kana iwe ukakwanisa kutumira mapaundioles kuti mwana wako apfeke sechinhu chinopfurikidza neshangu dzavo dzekunze kana dzichinge dzanyoro kana kuti dope munhandare yekutamba. Isu tinotenda nekuda kwemipiro yokuzvidira yezvokudya, zvokubika, kushanyira zvekudzidzisa.
Sezvo isu tiri chikamu cheZvondo 'Zvibereko uye Vegetable Scheme, tinopa sarudzo dzakanaka dzekudya zvekudya kune vana. Chibereko nemiriwo zvinogona kucheneswa kuti zviite smoothies / jisi, kubikwa kana kudyiwa zvakasvibirira. Kana iwe uchida kuti tipe chikafu chemweya wako, kana kuti unoda kutumira chimwe chinhu, tapota taura nemudzidzisi wekirasi yako. Isuwo tinokwanisa kupa mukaka sechinwiwa chisarudzo kuchikoro.
Ndapota cherechedza kuti hatina mativi kuchikoro kune ani zvake wevana, saka tapota chenjerera kana iwe uchitumira zvokudya nemiti.
Kumba Chikoro Diaries
Ndapota fungai bhokisi riri pedyo nemharidzo kuitira kuti tizive kuti yakanyorwa.
Kunyange zvazvo tine mufaro mukuru kuvabereki / vatariri kuti vave nekutarisana nevadzidzisi kuburikidza ne email, tapota cherechedza kuti vadzidzisi vazhinji vari mukirasi yakazara nguva, uye vane nguva shoma yekuwana maimeri avo. Kana iwe uchida kutaura nemudzidzisi wemwana wako nokukurumidza kana kana nyaya yacho ichikumbira, tapota nyora kunyora muimba yemwana wako / chikoro chekuchikoro kana kuti usiye mutauro wefoni kwavari nehofisi yekuchikoro.
Mwana wako ane hoteti yeTalk-Time. Izvi ndezvawe uye vadzidzisi vekirasi yako kuti vataure uye vanyore kusvikira kumashure e10 kuitira kuti mwana wenyu awane hurukuro dzavo. Makadhi acho anonyora-pa / akadzima (chinyorwa chete shandisa peni yakapiwa), pamwe chete pane chikwama chepurasitiki chakajeka kuti iwe uise mifananidzo yako.
Ndapota, shandisa izvi kakawanda sezvaunogona, uye rangarira kuchengeta muhomwe yengwana yako saka inowanikwa kwatiri kunyora meseji. Izvi zviri kuwedzera kumari yevabereki vako veimba / yechikoro.
Isu tine mupiro wepadheche yevana vanoda kuapfekedza mumvura ye hydrotherapy, kana mumadziva evanhu pavanoenda kushambira. Kana iwe uchida kuraira imwe kuti ishandiswe kunze kwechikoro, tapota taura naAlison Rees pachikoro. Kana mwana wako achida padhoti yekushambira, uchawana tsamba inokumbira muripo.
Pane kuti mwana wako arege kushaya hydrotherapy kana kuti kushambira mushure, kana tine imwe yemhuka iyo mumwe mwana akakurira kunze, tichaiitira mwana wako. Ndapota, regai tizive kana iwe ungatida kuti TITI.
Imotokari yekutanga pamagumo emugwagwa wedu ndeyeMabasa Okurapa, uye nzvimbo ndeyevashandi vavo chete. Kupaka motokari mumotokari yedu inoenderera mberi kunenge isina kukwana. Kune nzvimbo dzevabereki / vatariri vanosiya vana vavo asi kwete kugara kwenguva yakareba kumisangano, etc. Tinoda kukurudzira iwe kutora motokari dzako kubva panzvimbo yekukurumidza nokukurumidza.
Kutaura uye Kurapa Kwemitauro Home Kunoshanyira
Kutaura kwedu nemitauro vanachiremba vanoda kuziva kushanya kwemazuva panguva dzezororo dzechikoro, kuti vatsigire iwe mukugadzira mapurogiramu angashandisa kumba. Kana iwe uchida kuti mumwe wavo ataure newe pamusoro peizvi, tapota bvunza mudzidzi wako wekirasi kuti adzire mashoko ako kune avo kana kuvadana pa 020 8361 1993.
Zhizha Nguva 2019 Siblings Boka
on 30.09.2019 by Jessica Ellinor (Mutambi uye Mufambi Therapist)
International Lunch paOakleigh
Zuva reMitambo Mabasa
2019 Oakleigh School & The Early Years Center